Usuku Lukazwelonke eMbusweni omusha waseSaudi Arabia luzokhanya ngokukhazimulayo eMhlabeni Wezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » I-Saudi Arabia Breaking News » Usuku Lukazwelonke eMbusweni omusha waseSaudi Arabia luzokhanya ngokukhazimulayo eMhlabeni Wezokuvakasha
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Abantu • I-Saudi Arabia Breaking News • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • Wtn
UMhlonishwa, uNgqongqoshe Wezokuvakasha waseSaudi, uMnu Ahmed Aqeel AlKhateeb, wayengagcini ngokudansa no-HE Edmund Bartlett, uNgqongqoshe Wezokuvakasha eJamaica. Udansa umdanso womhlaba wezokuvakasha.
Umhlaba ubheke usizo eRiyadh, kanti usizo lusendleleni.
ISaudi Arabia ibilokhu inyuka ngesikhathi salo bhubhane ngezindlela eziningi.
Usuku lwanamuhla lukazwelonke lungahle futhi lube wuSuku Lwezokuvakasha Lukazwelonke lweSaudi Arabia umhlaba ubukele.
Usuku Lukazwelonke Lwe-Saudi Arabia luhlale lugujwa ngomhla ka- Septhemba 23rd.
Eyaziwa endaweni njenge-Al-Yaom-ul-Watany, kumaka uSepthemba 23rd 1932, lapho iNkosi u-Abdulaziz imemezela ukuhlanganiswa kwezwe njengombuso.
Umbuso waseSaudi I-Arabia yasungulwa ngo-1932 yiNkosi u-Abdulaziz (owaziwa njengo-Ibn Saud eNtshonalanga).
Lapho noma ngubani ebuzwa kulezi zinsuku ngeSaudi Arabia, imicabango ngokuhamba nezokuvakasha ilingana nemicabango kawoyela nengcebo.
Lokhu kwakwehluke kakhulu phambilini ngenkathi umbuso uvulekele ezokuvakasha zenkolo noma zebhizinisi kuphela.
Kusuka “ekungabikho kwezokuvakasha”, iSaudi Arabia iguquke yaya “kukho konke ngezokuvakasha” namuhla.
ISaudi Arabia ayigcinanga ngokuba ngumdlali wesifunda obaluleke kakhulu emkhakheni wezokuvakasha kepha, ngaphandle kokungabaza, ingomunye wabadlali abaluleke kakhulu emhlabeni.
Ukusingatha amahhovisi ezifunda njenge-UNWTO, i-WTTC, izwe lisebenzisa izigidigidi zamaRandi hhayi ukuhlenga umkhakha walo kuphela kepha nokusiza umhlaba.
Iqembu Lenzalo YaseSaudi by Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba ngaphansi kobuholi be HRH uDkt Abdulaziz Bin Naser Al Saud noRaed Habbis ineqembu le-WhatsApp Discussion elisebenza kakhulu njengamanje elibonwa eWTN.
ISaudi Arabia ibinethemba lokuba ikhaya elisha leWorld Tourism Organisation (UNWTO). Ukuba nendlunkulu ye-UNWTO eMbusweni kuzogcizelela isimo somhlaba wonke njengomholi wezokuvakasha womhlaba wonke weSaudi Arabia.
Uma a I-Saudi Crown Prince kanye noNdunankulu waseSpain ukukhuluma kungabaluleka ukuthi ibhizinisi le-UNWTO liyeke ukuvelela okunjalo ngoMbuso. I-UNWTO ikomkhulu layo eSpain, inika uMbuso waseSpain isikhundla somhlaba wonke kwezokuvakasha, kanye nesihlalo esihlala njalo eMkhandlwini Ophethe we-UNWTO.
Kubukeka sengathi izingxoxo maqondana nokugwema isenzo esenziwe yiSaudi Arabia sokunikeza i-UNWTO ikhaya elisha okwamanje ziyaqhubeka.
IYurophu, iMelika, noma iChina ziyesaba ukuthi iSaudi Arabia inyuka lapho ivame ukwehluleka khona, kepha idala ithemba e-Afrika, e-Asia, naseCaribbean nakwezinye izifunda.
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica u-Edmund Bartlett wayejabule kakhulu nge-Saudi Arabia, lokho UMhlonishwa uMnu u-Ahmed Aqeel AlKhateeb, wase-Saudi Arabia ubonakale edansa no-Edmund Bartlett, onguNgqongqoshe Wezokuvakasha eJamaica ezweni likaBob Marley.
Umhlonishwa Mnu. Ahmed Aqeel AlKhateeb, Saudi Arabia udansa no-Edmund Bartlett, uNgqongqoshe Wezokuvakasha eJamaica
Ukuma komhlaba wonke kwezokuvakasha komhlaba wonke kuyashintsha, futhi kungahle kudlulele eSaudi Arabia.
Alikho elinye izwe emhlabeni elakhombisa umbono onje womhlaba ngalo mkhakha esikhathini esedlule. Kukhona okungaphezu kokubona, kunemali, imali eningi.
Lapho iSaudi Arabia ivela emhlanganweni, engxoxweni, iba yinto yomhlangano noma yengxoxo.
E-WTTC Sumit eCancun ngoMeyi ukuvela kukaNgqongqoshe waseSaudi kwaholela ekutheni umphathi we-WTTC uGloria Guevara ayeke umsebenzi wakhe e-WTTC. Manje usengumeluleki ophezulu kukangqongqoshe I-AlKhateeb, ehlala eRiyadh, futhi igubha uSuku Lukazwelonke Lwe-Saudi namuhla njengesakhamuzi saseMexico.
Kubukeka kuhambisana nesithombe sezwe elivulekile ngokwengeziwe esilungele ukuqala ikusasa elisha eliqhakazile uma kukhulunywa ngokupholisha isithombe salo emakethe yomhlaba.
Namuhla uMbuso ugubha iholide lawo leSizwe - futhi nakanjani leli yiholide elibaluleke kakhulu emkhakheni wezokuvakasha nezokuvakasha kuyo yonke indawo.
ISaudi Arabia yahlanganisa izifunda ezine zaba yizwe elilodwa ngochungechunge lokunqoba okuqale ngo-1902 ngokubanjwa kukaRiyadh, ikhaya lokhokho bomndeni wakhe, iNdlu yaseSaud.
Unyaka nonyaka, uSepthemba 23 uyithuba lezakhamizi zaseSaudi lokugubha amagugu azo amasiko futhi zibheke esikhathini esizayo. Ngesikhathi semikhosi yosuku lukazwelonke, imigwaqo ezweni lonke igcwele okuluhlaza nokumhlophe — imibala yefulegi laseSaudi eboniswe emidwebeni yaseDoodle. Izakhamizi zingabonakala zihlotshiswe ngale mibala engokomfanekiso futhi zikhombisa ifulegi lesizwe ezimotweni nasemakhaya abantu.
Ekhaya lapho kuzalwa khona amaSulumane futhi manje enza inguquko encane yezenhlalo nezomnotho, uMbuso waseSaudi Arabia ugubha iminyaka engu-91 wazalwa September 23. Isiqubulo soSuku Lukazwelonke LweSaudi lwalo nyaka sithi “Ikhaya Lethu”.
Usuku lukazwelonke lwaseSaudi lugujwa nge imidanso yesintu, izingoma, nemikhosi yesintu. Imigwaqo nezakhiwo kuhlotshiswe ngamafulegi aseSaudi, futhi abantu bagqoka imibala kazwelonke eluhlaza okotshani nokumhlophe, futhi babonisa amabhaluni ngokufanayo.
ISaudi Arabia, ngokusemthethweni uMbuso waseSaudi Arabia, iyizwe eliseNtshonalanga ye-Asia. Ihlanganisa iningi leNhlonhlo Yase-Arabia, enendawo engamakhilomitha angama-2,150,000. ISaudi Arabia iyizwe elikhulu kunawo wonke eMiddle East, futhi iyizwe lesibili ngobukhulu emhlabeni wama-Arabhu.
Ezokuvakasha zithathwa njengombono wanamuhla wokukhula okusha.
UMnyango Wezokuvakasha umemezele ukuthi uMbuso uvulele izivakashi zakwamanye amazwe iminyango futhi ususe ukumiswa kokungena kwabanama-visa abavakashi kusuka ngo-Agasti 1, 2021.
UMbuso utshala imali kwezokuvakasha ngendlela enkulu. Umuntu owenza lo mbono wezokuvakasha ungungqongqoshe onomqondo wangempela womhlaba wonke, uMhlonishwa uMnu u-Ahmed Aqeel AlKhateeb.
Ungungqongqoshe Wezokuvakasha eSaudi Arabia. Unesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-25 kwezotshalomali nasezinsizakalweni zezezimali, lapho asungula khona, waphatha, futhi wahlela kabusha ama-ejensi nezinkampani zikahulumeni eziningi. Uyaziwa ngekhono lakhe lokuhola izinguquko ezikhungweni kanye nokufeza imibono yesikhathi esizayo ngokufanele nangempumelelo.
Njengamanje, uphethe izikhundla
Usihlalo weBhodi Labaqondisi leSaudi Tourism Authority.
Usihlalo weBhodi Yabaqondisi Yesikhwama Sokuthuthukiswa Kwezokuvakasha.
Usihlalo weKomidi Lezinhlelo Zokuphila
Usihlalo weBhodi Yabaqondisi weSikhwama Sentuthuko saseSaudi
Usihlalo WeBhodi Labaqondisi Bezimboni Zezempi ZaseSaudi Arabia (SAMI).
UNobhala Jikelele kanye neLungu leBhodi labaPhathimandla noma iDiriyah Gate Development Authority
UNobhala Jikelele kanye nePhini likaSihlalo weBhodi Yabaqondisi baseNew Jeddah Downtown
Ilungu Lebhodi Yabaqondisi Yesikhwama Sotshalomali Lomphakathi.
Ilungu leBhodi labaqondisi leNhlangano Jikelele Yezimboni Zezempi.
Ilungu loMkhandlu Wezomnotho Nentuthuko.
Ilungu leBhodi labaqondisi beNeom Company.
Ilungu leBhodi Yabaqondisi yeThe Red Sea Development Company.
Ilungu Lebhodi Yabaqondisi Yesikhwama Sentuthuko Kazwelonke.
Ukutshalwa kwemali emkhakheni wezokuvakasha kungenye yezinsika zeSaudi Vision 2030 kanye nobufakazi bokuphikelela ukuqhubekela phambili ukuze kufezekiswe izifiso nezinhloso zayo:
Ukutshalwa kwezimali emkhakheni kunomthelela ekwakheni amathuba okutshala imali anenzuzo kubatshalizimali basekhaya nabangaphandle.
Asikuthathi ezokuvakasha njengomshayeli wokukhulisa umnotho kuphela, kodwa futhi njengebhuloho lokuxhumana kwamasiko nezwe, elingakhuphula izinga lokuqonda nokuhlonipha okuhlangene.
Ezokuvakasha zingenye yemikhakha ekhula ngesivinini esikhulu emhlabeni. Eminyakeni eyisishiyagalombili edlule, umkhakha wezokuvakasha ukhule ngokwesilinganiso esidlula isilinganiso somhlaba jikelele.
Ngokwezibalo zoMkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha, lo mkhakha ufaka isandla kumaphesenti ayishumi omkhiqizo wekhaya omningi (GDP).
Ngonyaka odlule, izinga lokukhula kwabavakashi limi kumaphesenti angu-3.9, kanti umnotho womhlaba wonke uthole amaphesenti angu-3.2.
Kulindeleke ukuthi umkhakha wezokuvakasha ukhule ngamaphesenti angama-3.7 ngonyaka wama-2029, okuzofaka isandla ngaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-13 emnothweni womhlaba olingana namaphesenti ayi-11.5 eGDP yomhlaba.
Umkhakha wezokuvakasha usekela imisebenzi eyizigidi ezingama-319 emhlabeni wonke - okuwumsebenzi ocishe ube munye kwemisebenzi eyishumi emhlabeni jikelele - futhi unesibopho sokwakha umsebenzi owodwa emisebenzini emihlanu ngayinye enikezwe eminyakeni emihlanu edlule.
Ezingeni lamazwe omhlaba, umkhakha wezokuvakasha uthathwa njengobanzi kakhulu ngokubamba iqhaza kwengxenye enkulu kakhulu yentsha nabesifazane uma kuqhathaniswa nabasebenzi bonke.
Umsebenzi uyaqhubeka wokwakha ingqalasizinda kanye nezinsizakalo eziseMbusweni ngenhloso yokuhlangabezana nezidingo ezandayo ngendlela evumelana necebo lezokuvakasha eMbusweni:
- Angu-150,000 amakamelo amahhotela azokwakhiwa eminyakeni emithathu ezayo. Amaphesenti angama-70 ala mahhotela azosetshenziswa umkhakha ozimele.
- UMbuso ubambisene nabatshalizimali bakuleli nabakwamanye amazwe nezimali zotshalo-mali lwasekhaya, kubandakanya neTourist Development Fund, bafuna ukusungula amakamelo amahhotela angama-500,000 kulo lonke elaseMbusweni ngonyaka ka-2030.
- Kusayinwe amamemorandamu amaningi okuqonda anenani eliphelele elingaphezu kwezigidigidi ezingama-115 zamaRiyali aseSaudi ukwenza ngcono ingqalasizinda nokwandisa inani lamakamelo amahhotela akhona.
- UMbuso ufuna ukukhuphula umthamo wokungena wezikhumulo zezindiza zoMbuso ngabagibeli abangaphezu kwezigidi eziyi-100 ngonyaka.
Okwamanje amaqiniso abhekene neSaudi Arabia:
Ukwehla komnotho okubangelwe yilo bhubhane kube nomthelela omkhulu emkhakheni wezokuvakasha, ikakhulukazi imikhakha yezindiza neyehhotela.
Ukwehla kwabagibeli ngezigidi ezingama-26.
Kunemisebenzi engama-200,000 ethintekile kulo mkhakha.
UMbuso usunikele ngezinhlelo zokweseka ezomnotho ngamariyali aseSaudi ayi-120 billion.
AmaSaudis kulo mkhakha ahlomulile kulolu hlelo lokuxhasa imiholo evela kuhulumeni.
UMbuso wethule uhlelo lokuxhasa amaholo amaSaudi emikhakheni ezimele ngenani eliphelele lamaRiyali aseSaudi ayi-9 billion. Lokhu kwesekwa kubhekiswe emkhakheni wezokuvakasha.
Kuhlinzekwe ithuba ngohlelo lwe-Ajeer lokushintshana ngezinzuzo phakathi kwezikhungo ukunqanda umonakalo.
Imali ehlobene nezokuvakasha kanye nomasipala yehlisiwe.
Amahhotela amukele izakhamizi ezingaphezu kuka-50,000 13,000 ezibuyile eMbusweni ngesinyathelo esithi "ukubuya kwesakhamuzi", lapho zihlaliswe emakamelweni angaphezu kwama-XNUMX amahhotela isikhathi esinqamula phakathi kweviki elilodwa kuya kwamabili.
Ngenhloso yokukhuthaza ezokuvakasha zakuleli, uMbuso wethule iSizini Yasehlobo laseSaudi ehlanganisa izindawo eziyishumi zokuvakasha ezweni lonke.
Isu Lwezokuvakasha eMbusweni
Umbuso ugunyaze isu likazwelonke lezokuvakasha, eliveze imigqa esemqoka yokufisa komkhakha ohambisana nezinhloso ze-Saudi Vision:
Sihlose ukukhulisa umnikelo womkhakha wezokuvakasha kwi-GDP kusuka kusilinganiso samanje samaphesenti ama-3 kuye ngaphezu kwamaphesenti ayi-10 ngonyaka wama-2030.
Umkhakha wezokuvakasha uhlose ukudala amathuba emisebenzi ayisigidi esisodwa ukuze ifinyelele emisebenzini eyizigidi eziyi-1.6 emkhakheni wezokuvakasha ngo-2030.
Sihlose ukuheha ukuvakashelwa okuyizigidi eziyikhulu kwasekhaya nakwamanye amazwe minyaka yonke ngonyaka ka-100.
UMbuso wethule i-visa yezokuvakasha ngoSepthemba 2019, lapho izakhamizi zamazwe angama-49 zingathola khona i-visa ngogesi, ngenkathi abaphethe ama-visa ase-US, e-UK naseSchengen bengathola i-visa lapho befika, futhi izikhonzi zamanye amazwe zingafaka isicelo sokuthola i-visa ngokuvakashela abamele uMbuso emazweni abo.
Amazwe angama-49 alinganiselwa kumaphesenti angama-80 endleko yezivakashi emhlabeni wonke futhi abamba cishe amaphesenti angama-75 abantu abafuna uhambo lokunethezeka lokuvakasha emhlabeni.
ITudist Investment Fud
• Ziyini izinhloso zokusungula iSikhwama Sokutshala Imali Sabavakashi?
- Ukusungula iSikhwama Sokutshalwa Kwezimali Kwezokuvakasha kuhlose ukukhuthaza ukutshalwa kwezimali kwezokuvakasha eMbusweni, ukwehlukanisa izindlela zokuthola imali, ukwandisa umnikelo womkhakha wezokuvakasha kwi-GDP, nokwakha imisebenzi eminingi yabesilisa nabesifazane baseSaudi emkhakheni wezokuvakasha, kanye nokunikela ekwamukeleni izivakashi eziningi eMbusweni ngokuya ngezinhloso zecebo likazwelonke lezokuvakasha kanye neSaudi Vision 2030.
• Yimaphi amathuluzi isikhwama esizowasebenzisa ukuxhasa nokuheha izimali zabavakashi?- Isikhwama Sokutshalwa Kwezokuvakasha sisungulwe ngenhlokodolobha eyizigidigidi ezili-15 zemikhaya yaseSaudi. Isikhwama futhi sisayine izivumelwano zokusebenzisana namabhange endawo ukuxhasa amaphrojekthi wezokuvakasha okungenani ama-riyals ase-Saudi ayi-150 billion.
Lesi sikhwama, ngokubambisana namabhange otshalo-mali, sesisungule imali yokutshala imali emikhakheni eyehlukene yezivakashi.
• Yimaphi amathuba okutshala imali ahlinzekwa yisikhwama?
- Enye yezinjongo ezibaluleke kakhulu kulesi sikhwama ukuxhasa nokukhuthaza ukutshalwa kwezimali kwabavakashi eMbusweni.
Ngalo mqondo, lesi sikhwama sivula izici zokubambisana nabatshalizimali ngqo ngokubanikeza ukusekelwa kubo kunoma yini ephathelene namaphrojekthi ezokuvakasha angaholela ekwakhiweni komkhakha wezokuvakasha ezindaweni ezahlukahlukene zoMbuso, kufaka phakathi imikhakha eyahlukahlukene, njengamahhotela, izindawo zokudlela kanye nokuthuthukisa izindawo zabavakashi, izihambi ngokujwayelekile nabahleli bohambo.
Lesi sikhwama siphinde sihlose ukwenza indawo yokutshala izimali ihehe kakhulu umkhakha ozimele futhi sinikeze ukusekelwa kwayo ukuthola izikimu ezinenzuzo ethe xaxa, okudala amathuba amakhulu otshalomali eMbusweni ngokulungisa indawo yezivakashi ngendlela evumelana necebo likazwelonke lezokuvakasha.
Ngaphezu kwalokho, izimali zijabulela iqhaza elibalulekile ekuthuthukiseni imboni yezokuvakasha ngokujwayelekile nokuvuselela okuningi
Abesilisa nabesifazane baseSaudi ukuthi bazibandakanye kulo mkhakha ngenhloso yokunikeza imisebenzi emisha eyisigidi ngonyaka ka-2030, ngaphezu kokukhulisa umnikelo womkhakha wezokuvakasha eMbusweni ube ngamaphesenti ayi-10 ngonyaka ka-2030 ukhuphuke usuka kusilinganiso samanje samaphesenti ama-3, futhi uhlela ukuvakashelwa izivakashi eziyizigidi eziyikhulu.
• Yiziphi izixazululo zezimali ezinikezwa yisikhwama?
- Isikhwama sisekela izinkampani ezizimele ngokunikela ngemalimboleko yokutshala imali, kanye nokutshala imali kumaphrojekthi ngokuba namasheya kulezi zinhlelo. Isikhwama futhi sihlinzeka ngeziqinisekiso kwamanye amaphrojekthi.
- Kwesinye isikhathi kunikezwa ukwesekwa kwamaphrojekthi avelele nawaphayona ngokunikeza zonke izixazululo ezingenhla. Isikhwama, ngokubambisana nezinhlaka ezifanele zikahulumeni, sifaka isandla ekuhlinzekeni iziza zomhlaba ngamaphrojekthi athile abalulekile futhi abalulekile.
Iwebhusayithi Yesikhwama Sokuthuthukiswa Kwezokuvakasha
IBoeing 737 MAX isuswe ukundiza esikhaleni somoya saseNdiya futhi